eNasha.com - सुशीलको बिहे पार्टी र पेज थ्री गफ
सुशीलको बिहे पार्टी र पेज थ्री गफ
- ‌अच्युत कोईराला
"सिनेमाको पर्दामा एक्सन नायक तर डरको पक्कु ! को होला त्यो लट्टु ?", एक पत्रकारले नायक सुशील क्षेत्रीको बिहे पार्टी लगभग अन्ताक्षरी शैलीमा प्रश्न गरे । अर्का एक पत्रकारले वरिपरि आँखा डुलायो, त्यहाँ शिव श्रेष्ठ थिए । जसलाई नेपाली एङ्ग्री योङ (अब त ओल्ड) म्यान भनेर चिनिन्थे । अर्का लगभग एक टनका खलपात्र विजय देउजा थिए । कसलाई पो भन्ने होला भनेर रन्थनिदै गर्दा अर्कातिरबाट जवाफ आयो- "हाम्रो बेहुलो !"
यसरी शुरु भयो, उद्योगका सबैभन्दा एलिजेबल ब्याचलरको बिहे भोज ।
हेर्दै डरलाग्दो काया बोकेर आएका राजेन्द्र खडगी मेरो बीचमा छिरे र अंगालो हाले । मैले मौका चुक्न दिइनँ- "के हो दाइ, तपाइँ त सिनेमा पो निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ अरे ?" 'ए, थाहा भइसक्यो !' भन्ने कर्के नजरले मतिर हेरेपछि सुनको दाँत टलल्ल टल्काउँदै खडगी मुस्काए अनि थपे- "अँ, एउटा गरौँ भनेर !" उत्तर निकै छोटो आयो भन्ने लागेपछि मैले फेरि सूचना चुहाउन चाहेँ- "फिल्म त खत्रा होला नि, होइन ?" अब भने खडगीले सूचना चुहाए- "अँ, मेरो इन्ट्री अलि खत्रा बनाउन म फिल्म बैंककमा खिच्दैछु । मैले गरेपछि अलि फरक त हुनुपर्यो, कि कसो ?" यति सूचना चुहाउन पाएपछि म पनि खुशी, त्यति भनेर कसैकसैको शेखी झारेकोमा उनी पनि खुशी ! खबर अनुसार उनका चरम प्रतिद्वन्द्वि एन्.बी. महर्जन पनि सुनील मानन्धरद्वारा लगानी गरिने एउटा चलचित्रको निर्देशन लागि अनुबन्धित भइसकेका छन् ।
"ऊः हेर न श्रीकृष्णजी देखिनु भयो, (भगवान् श्रीकृष्ण प्रकट हुनु भएको होइन, हाम्रा मनपर्ने नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ चैँ क्या त !) तर कस्तो दुब्लो हगि ?" एक जना महिलाले उनको दुब्लोपनमा दुःख मानिन् । उनले थप्न पनि भुलिनन्- "धेरै जसो पार्टीमा उहाँले त्यही एउटा कोट लगाउनु हुन्छ हो ? कि उहाँलाई यो कलरको कोट ज्यादै मन परेर एक दर्जन सिलाउनु भएको छ ?" योभन्दा ज्यादा श्रीकृष्णका बारेमा सुन्नु पर्ला भनेर मैले त्यहाँबाट लस्किनु नै श्रेयस्कर ठानेँ ।
एउटा टेबुल वरिपरि पत्रकारहरु प्रकाश हुमागाइँ, विश्वमणि सुवेदी, सुशील देवकोटा, सविन शाक्य, शान्तिप्रिय, टेलिपत्रकार सुरेश दर्पण पोखरेल, चलचित्र निर्देशक शोभित बस्नेत, नायिका रेजीना उप्रेती, द्वन्द्व निर्देशक योगेन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक शिव रेग्मी, अभिनेता विजय देउजा आदिको भीडमा (म पनि त्यहीँ थिएँ ।) कुखुराको साँप्रो भरिएको प्लेट लिएर एक भाइ टुप्लुक्क आइपुगे । "सही समयमा आइपुग्नु भयो भाइ", नायिका रेजीनाको अनुहारमा खुशी छायो । तर वरिपरिका सबै त्यतिबेला झन् हषिर्त भए जब नायिका रेजीनाले सबैलाई खुशी पार्न त्यो प्लेटलाई आफैँले लिएर टेवुल बीचमा राख्न खोजिन् । "प्लेटै त नराख्नु होला", हलुका प्रतिवाद थियो, प्लेटवाला भाइको । प्लेटको आधाभन्दा बढी भाग टेबुलको कागजे प्लेटमा सारिसकेपछि नायिका रेजीनाले खुशी हुँदै ती भाइलाई बिदा दिइन् । शायद निर्देशक बस्नेतलाई यो रुचिपूर्ण लागेन, उनको अनुहारमा चिन्ताको रेखा प्रष्टसँग देखिए ।
"त्यसो गर्नु हुँदैन", उनले आफ्नो फेवरेट नायिकालाई सम्झाउन थाले- "अरुले देखे भने के भन्लान् ?"
शायद नायिकालाई त्यसो भनेको रुचेन, भनिन्- "मैले एक्लै खान झिकेको हो र ? तपाइँहरु सबैको सेवा पो गर्न खोजेको !" तर यो उत्तरले निर्देशकको चित्त बुझेको देखिएन । तर वरिपरिको समूह उनको सेवाबाट प्रफूल्ल देखिन्थ्यो ।
"बाब्ब्बा ! आकाश अधिकारीलाई त मान्नुपर्छ !" एक पत्रकारले मलाई कोट्याउँदै भने- "आज श्रीमती नल्याएका कारण अरु महिलासँग निकै मच्चीमच्ची नाचिरहनु भएको छ यार, ऊ हेर त !" यस्सो फर्केर हेर्दा त हो रहेछ । ती महिला पनि के कम, क्लाउडिया नभएको मौका पाएर अरु हिरोइनहरुलाई उछिनेर आकाशलाई नाच्न साथ दिइरहेकी थिइन् ।
"सबैभन्दा मज्जाकी त विपना नै !" अर्को कुनाबाट आवाज आयो ।
"किन नि ?"
"हेर्न तिनले त शिव श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण, दिलिपजस्तो 'हट'लाई नचाएरै छाडिन् । त्यति मात्र कहाँ हो र ? उनले त बूढी आमैलाई पनि छाडिनन् !"
"के गरिन् बूढी आमैलाई ?"
"आमैको सासै फूल्ने गरी हात समाइसमाई, घुमाइघुमाई नचाउँदा वरिपरिका सबैको स्याब्बासी पाइन् ।"
"ए त्यसो पो ?"
"अँ त ।"
कुरा सकिएको ठानेर मैले पनि आफ्नो टाउको घुमाएँ । अब खाना खानु पर्लाजस्तो लागेर साथीहरुसहित डिनर टेबुलतिर हुत्तियौँ । एक महापुरुष अरुको बाटो ओगटेर खसीको मासु चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सकिन लागेको भाँडो कोट्याउन थाले । सानोतिनो खानेहरुको जुलुस 'ट्राफिक जाम'मा अड्क्यो । उनलाई कसैगरी 'साइड' लाउन नसकिएपछि बरु भद्रभलाद्मीहरु नै 'साइड' लागे । ती शक्ति सम्पन्न महापुरुषभन्दा 'वेटर'हरु झन् पावरफूल रहेछन् । तिनले मासु नथपेरै तिनलाई साइड लगाइदिए । बरु ती महापुरुष साइड लागेपछि अर्को एक भाँडो मासु थपिएको देखियो ।
बिहेभोजको रमझम सकिएकै थिएन । नाच्नेहरु अझै व्यस्त थिए । झोलप्रेमीहरु सफ्ट र हार्ड डि्रंक्स सकिएकोमा थक्कथक्क मान्दै थिए । हामी भने आजको समाचार अपलोड गर्न हतारिएर अफिसतिर दगुर्न थाल्यौँ ।
Photo Gallery - Sushil Chhetri's Wedding Party
रानीको भात खुवाइ र पेज थ्री गफ
अभिनेता पेज3रोचक कन्ट्रोभर्सी क्या बात ! फिल्म फेस्टिबल सोच अभिनेत्री निर्देशक घोषणा ग्ल्यामर नवीनता पार्टी कार्यक्रम रोमान्स सेक्स सञ्चारकर्मी प्रविधि